Cawil Daahir oo la kulmay Beesha Waceyle, yaa loo magacabaya Wasiirka Beesha iyo Gudoomiyaha Boondheere Xogmuhiima!
Saturday May 05, 2018 - 02:26:41 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Cawil Daahir Salaad oo ah Weriye iyo barnaamij soo saaraha Telefishanka Universal ayaa Muqdisho ka wada Olole Xoogan oo uu ku raadinayo in u noqdo Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya.
Cawil Daahir Salaad ayaa isugu yeeray Nabadoonada Beesha Waceyle, Abgaal kadibna u sheegay in uu soo dhameestay Wasiirka Warfaafinta sidoo kalane u soo dhameeyay gabar uu isaga wato Degmada Boondheere ee Gobalka Banaadir.
Cawil Daahir Salaad oo u dhashay beesha Waceeysle gaar ahaan Macalin dhiblaawe,Aybakar gaab,ayaa sheegay in Beesha Cali Gaaf lasiinayo Gudoomiyaha degmada Boondheere oo uu la rabo gabar uu isaga wato isagana laga dhigaayo Wasiirka Warfaafinta kulan ka dhacay Hotel SYL Magaalada Muqdisho.
Wasiirka Warfaafinta waxaa horey isaga diiday Xildhibaan Saadaq Macalin Cabdikariim, oo kamid ah Mucaraadka Khayre iyo Farmaajo taaso la rabay in lagu qanciyo oo u dhashay Beesha Cali Gaaf.